DAAWO: M/weynaha Puntland oo ka jawaabay eedihii wasiirkii hore ee Deegaanka Puntland usoo jeediyey, magacaabayna wasiir cusub. – Puntlandtimes
BOOSAASO(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa goor dhaw magacaabay wasiirka wasaaradda deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland, xili uu saaka is casilay wasiirkii wasaaraddaas, ka dib markii uu Madaxtooyada ku eedeeyey in ay faragalin ku sameysay Mashaariicdii horumarineed ee ay wasaaraddu waday.
Sidda uu saxaafadda u sheegay hadal hayeen u hadlay madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Quraan-jecel, waxaa xilkan loo magacaabay Saleebaan Xaaji Cabdalla Sardheeye.
Puntland ayaa ka jawaabtay eedo ka soo yeeray wasiirkii hore ee wasaaradda Deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland Cali Cabdullaahi Warsame, waxaana ay sheegeen in wasiirka laga diiday 5 ceel biyood oo laga hirgalin lahaa wadada laamiga ah, in uu u weeciyo biyo-xireeno.
Hadal-hayeenka Puntland Cabdullaahi Quraanjecel, ayaa sheegay in mashaariicda U adkeysiga Abaaraha ay ahayd mashruuc ay leedahay wasaaradda Horumarinta Puntland, aysana wasaaradda Deegaanku waxba shaqo ku laheyn.
Afhayeenka Madaxweynaha Puntland wuxuu qiray in sameynta Dhaamamka iyo Biyo-xireenada ay ahaayeen kuwa ay masuuliyadooda leedahay Hay’adda biyaha Puntland ee PSAWEN, oo aysan waxba saameyn ah ku lahayen wasaaradda deegaanka.
Madaxtooyada Puntland kama jawaabin arrinta ku saabsan heshiiska cusub ee la saxiixay 6-dii bishan September, kaas oo dhabaha u xaarayay dhaamam iyo biyo-xireeno la hirgalinayo, taas oo ay hadda isku qabteen PSAWEN iyo Wasaaraddu.
Sidaas oo kale xog ay heshay Puntlandtimes.com ayna baahisay lama soo qaadin, gaar ahaana qoraalkii u dambeeyey ee GIZ ay soo dirtay oo ku wajahnaa arrimaha mashruucan oo la hakiyey.
Waziirkii is casilay dano shaqsiyeed iyo mid gaar ahaaneed iyo damiciisa quracan ayuu isku dayey in uu shicibka ku jaha wareeriyo. Aad buu u mahadsan yahay af-hayeen QuraanJecel sida uu xaqiiqada dhabta ah usoo ban-dhigay. Munaafiqiinta oo dhan waa in gabad iyo geed ay gaashaantaan laga gooyaa.